China Stiffening Nucleator BT-9806 Emeputa na Supplier | BGT
Na-agba ume Nucleator BT-9806
BT-9806 β-Crystal Nucleating Agent bụ teknụzụ ọgbara ọhụrụ dị elu nke obere ụwa.
Enwere ike iji ya mepụta ngwaahịa PP nke PP-R tube, mmechi, akpaka na ngwa ngwa yana wdg.
BT-9806 bụ β-Crystal nucleating gị n'ụlọnga na elu tech patent ngwaahịa mere nke obere-ụwa nke nwere ike melite siri ike, okpomọkụ distortion okpomọkụ nke polyolefin resins enweghị iweda ndị ọzọ n'ibu Njirimara. Ngwa dị maka ọgwụ ịkpụzi, elu-asụ ingfụfụ ngwaahịa na kwes deformation ihe na biaxially ndinyanade mbịne film.
1. Na-anaghị egbu egbu ma na-esi isi;
2. Ike mmetụta nwere ike ịbawanye site na oge 1-6 ma na-agbasi ike;
3. Ike ikpo ọkụ ọkụ nwere ike ịbawanye 10-40 ℃;
4. Ihe owuwu ahụ ga-adịgide adịgide mgbe oge ole na ole gachara.
20 n'arọ / kaadiboodu igba
Ngwunye Ngwunye bụ ụdị mmako nke kwesịrị ekwesị maka plastik crystallized ezughị ezu dị ka polypropylene na polyethylene. Site na-agbanwe crystallization omume nke resin na mee ngwangwa crystallization ọnụego, nwere ike nweta nzube nke shortening na ịkpụzi okirikiri, na-amụba doo anya elu gloss, rigidity, thermal deformation okpomọkụ, ike ọdụdọ na mmetụta na-eguzogide nke okokụre ngwaahịa.
Polymer gbanwetụrụ site Ngwunye Ngwunye, Ọ bụghị nanị na ọ na-ejigide njirimara mbụ nke polymer, kamakwa nwere ọnụahịa arụmọrụ ka mma karịa ọtụtụ ihe nwere arụmọrụ nhazi dị mma na ọtụtụ ngwa. Iji Ngwunye Ngwunye na PP ọ bụghị naanị dochie iko, kamakwa dochie ndị ọzọ polymer dị ka PET, HD, PS, PVC, PC, wdg maka ịme mkpọ nri, mmejuputa ahụike, isiokwu ọdịnala maka iji ụbọchị, na-akọwapụta ihe mkpuchi na ihe ndị ọzọ dị elu.
Nke gara aga: Na-agba ume Nucleator BT-9801Z
Osote: Ezigbo Masterbatch BT-800/810
Stiffening Nucleator N'ihi eyi